Dagaalka aan muuqan ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha (Coronavirus) -
HomeWararkaDagaalka aan muuqan ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha (Coronavirus)
Dagaalka aan muuqan ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha (Coronavirus)
Madaxweyne Trump ayaa marar badan ku celceliyay in cudurkan hadda dunida dhibataada ku haya uu yahay “fayraska Shiinaha, halka wasiirkiisa arrimaha dibaddana, Mr Pompeo uu ku tilmaamay “feyraska Wuhan”, arrintaas oo ka careysiisay xukuumadda Beijing.
Madaxweynaha iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo ayaa Dowladda Shiinaha ku dhaleceeyay in ay ku guul dareysatay wax ka qabashada fayraskan, balse afhayeen u hadlay Shiinaha ayaa ku gacan seyray eedeymaha kasoo yeeray Mareykanka.
Dhinaca kale Baraha bulshada ee dalka Shiinaha waxaa aad loogu dhex wadaa in fayraska corona ay dalkaas geeyeen militeriga Mareykanka, waana arrin aad u xoogeysatay maalmihii lasoo dhaafay. Seynisyahannada caalamkana waxay sheegeen in fayraska uu yahay mid dabiici ah oo iskii u bilowday.
Dagaalka labada dhinac ma ahan oo keliya mid ku eg dhanka afka ee waxaa jira waxyaab kale oo aad muhiim u ah oo socda.
Horaantii bishan markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu xuduudadahiisa ka xirtay dadka ka imanaya dalalka Midowga Yurub, sida Talyaaniga; Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay in gargaar caafimmaad iyo dhakhaatiir uu u diray Talyaaniga. Sidoo kale Shinaha wuxuu gargaar caafimmaad u diray dalal ay ka mid yihiin Iran iyo Serbia.
Fayraska corona ayaa dalka Shiinaha ka dilaacay xilli xiriirka labada dal uusan wanaagsaneyn, waxaana dagaalka uu ka dhashay xiriirka ganacsiga ee u dhaxeeya labada dhinac oo muddooyinkii dambe soo jiitamayay.
Labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa u muuqda in ay dib u hubeynayaan ciidamada milateriga, lagana yaabo in mustaqbalka uu isku dhac ku dhexmaro badda Pacific-ga.
Shiinaha ayaa hadda ah awood milateri oo ka jirta gobolka, wuxuuna hadda u xuub siibanayaa in uu nqodo dal saameyn ballaaran ku leh caalamka.Xanuunka ayaa sidoo kale khatar geliyay xiriirka labada dal, balse hadda Shiinaha waxaa muuqata in uu kasoo adkaaday xanuunkaas, dhaqaalaha Shiinaha na uu dib usoo kabanayo, door muhiim ahna uu ka qaadan doona sidii uu gacan uga geysan lahaa dhaqaalaha adduunka ee sii liicaya
Inkastoo sidaas ay jirto, haddana Shiinaha wuxuu ku hawlan yahay wax ka qabashada xanuunka corona, maadaama uu ka mid yahay dalalka soo saara dawooyinka iyo qalabka caafimmaad ee laga isticmaalo qeybo ka mid ah dunida.
Markii uu soo shaac baxay xanuunka corona, madaxweyne Trump wuu iska indha tiray dhibaatada caafimmaad ee xanuunka corona, balse hadda waxay noqotay arrin iyaga oo keliya aanan gaarin balse u gudubtay caalamka oo dhan.
Dad badan oo wax ka qora arrimaha dalalka reer galbeed ah waxay Shiinaha u arkaan in uu yahay dal diktaatoori ah, haatanna ay wax iska badelayaan fikirka dalal badan oo reer galbeed ah ay ka heystaan.
Xulafada Mareykanka waxay isha ku hayaan arrimo dhowr ah, laga mana yaabo in ay dhaleeceeyaan xukuumadda Trump iyo sida ay ula dhaqatay xilligan oo uu dunida aafeeyay fayraska corona, maadaama uu albabaada ka xirtay, balse kuwa badan waxaa usoo baxay fikirka ka duwan midkii ay ka heysteen dalka Shiinaha.